Arag Sawirrada: Haweeney Soomaali ah oo Daacish ka tirsan oo lasoo bandhigay - Caasimada Online
Home Warar Arag Sawirrada: Haweeney Soomaali ah oo Daacish ka tirsan oo lasoo bandhigay
Arag Sawirrada: Haweeney Soomaali ah oo Daacish ka tirsan oo lasoo bandhigay
Nairobi (Caasimada Online) – Dowlada Australia ayaa baahisay sawirada Haweeney Soomaali ah oo ka tirsan Kooxda Daacish, isla markaana xubin sare ka ah qeybta ku nool Koonfurta Australia.
Dowlada Australia ayaa sheegtay in Haweeneydaasi lagu magacaabo Zaynab C/raxmaan Khaliif isla markaana ay kamid tahay ardayda barata Caafimaad.
Dowlada ayaa sheegtay in Haweeneydan oo muddo badan si hoose ula shaqeyn jirtay Daacish lagu qabtay Kambaska Jamaacadda (Tafe) oo ku taalla magaalladda dekedda leh ee Adelaide Tafe ee Koonfurta Australia.
Haweeneydan lagu magacaabo Zaynab C/raxmaan Khaliif oo 23-jir ah waxaa la sheegay inay Kooxda Daacish kula xiriiri jirtey Online, isla markaana ay sheegtay inay daacad u tahay Kooxda Daacish.
Waxa ay sidoo kale Haweeneydan Kooxda u sahashay qorshooyin la doonaayay in lagu weeraro xarumo muhiima oo ay leedahay dowlada, kadib markii ay sawirada xarumahaasi ay la wadaagtay Dacish.
Sidoo kale, Zaynab C/raxmaan Khaliif oo iyadoo 14 jir tegtay dalkaasi waxa kaloo lagu eedeeyey inay ku luqeyn jirtey Nashiidada ama Heesaha Borobogaandada ee ay Kooxda Daacish ku baahiyaan Internet-ka marka ay gurigeeda joogto, waa sidaay hadalka u dhigeen.
HOOS KA DAAWO SAWIRADA HAWEENEYDA